प्रविधिको उचित प्रयोग कसरी गर्ने? | परिवारका लागि
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अल्बेनियन आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इबानाग इलोको इसोको उइघुर (सिरिलिक) उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा काजाक काजाक (अरबी) किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रोएसियन गा गून ग्रीक चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चीन (हाका) चेक जर्जियन जर्मन जापानी टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तेलगु थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज मङ्गोलियन मले मल्यालम माया मालागासी म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लिथुआनियन लुओ वारे-वारे वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
प्रविधिको उचित प्रयोग कसरी गर्ने?
प्रविधिले तपाईँको वैवाहिक जीवनलाई बलियो अथवा कमजोर बनाउन सक्छ। तपाईँको वैवाहिक जीवनमा चाहिँ यसले कस्तो असर गरिरहेको छ?
दम्पतीहरू के भन्छन्‌?
छलफलका लागि सुझावहरू
विवाहित जोडीहरूले बुद्धिमानीपूर्वक प्रविधिको प्रयोग गर्दा लाभ उठाउन सक्छन्‌। उदाहरणको लागि, केही श्रीमान्‌-श्रीमतीले सँगै नहुँदा एकअर्काको हालखबर सोध्न यसको प्रयोग गर्ने गर्छन्‌।
“‘म तिमीलाई माया गर्छु’ अथवा ‘म तिमीलाई सम्झिरहेको छु’ भनेर मेसेज गर्दा मात्रै पनि खुसी लाग्छ।”—जोनाथन।
प्रविधिलाई राम्रो तरिकामा प्रयोग नगर्दा यसले वैवाहिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन सक्छ। उदाहरणको लागि, कोही-कोही इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू बढी नै प्रयोग गर्ने भएकोले आफ्नो जीवनसाथीलाई पर्याप्त समय र ध्यान दिन सक्दैनन्‌।
“मैले फोन धेरै प्रयोग नगरेको भए मेरो श्रीमान्‌लाई मसित कुरा गर्न अझ सजिलो लाग्ने थियो भनेर मैले धेरै चोटि महसुस गरेको छु।”—जुलिसा।
कसै-कसैले इलेक्ट्रोनिक डिभाइस प्रयोग गर्दागर्दै पनि आफ्नो जीवनसाथीसित अर्थपूर्ण कुराकानी गर्न सकिहालिन्छ भन्‍ने सोचाइ राख्ने गर्छन्‌। समाजशास्त्री सेरी टर्केलले एकैचोटिमा धेरै काम गर्न सक्छु भनेर सोच्नु एउटा मिथ्या हो भनेर बताएकी छिन्‌। कसै-कसैलाई यसरी एकैचोटि धेरै काम गर्न सक्नु एउटा क्षमता हो जस्तो लाग्न सक्छ तर वास्तवमा यो क्षमता होइन। तिनको भनाइअनुसार वास्तवमा “हामीले काममाथि काम थप्दै जाँदा हाम्रो कार्य क्षमता घट्‌दै जान्छ।” *
“मलाई आफ्नो श्रीमान्‌सित कुरा गर्न रमाइलो लाग्छ तर उहाँ अरू नै काममा व्यस्त भएको बेलामा होइन। उहाँ आफ्नो डिभाइसमा व्यस्त हुनुभएको बेला म त्यहाँ भए पनि नभए पनि उहाँलाई मेरो वास्तै छैन जस्तो महसुस हुन्छ।”—सारा।
निष्कर्ष: तपाईँ प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँको वैवाहिक जीवनलाई फाइदा अथवा हानि पुर्‌याउन सक्छ।
प्राथमिकता तय गर्नुहोस्‌। बाइबल भन्छ: “अझ महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन्‌, सो तिमीहरूले पक्का गर्न सक।” (फिलिप्पी १:१०) आफैलाई सोध्नुहोस्‌, ‘म र मेरो जीवनसाथी आ-आफ्नो डिभाइसमै अचाक्ली व्यस्त भएकोले हामीले एकअर्कालाई दिनुपर्ने समय दिन सकिरहेका छैनौँ कि?’
“रेस्टुरेन्टमा खान गएका श्रीमान्‌-श्रीमती आफ्नो फोन चलाउनमै व्यस्त हुनु दुःखलाग्दो कुरा हो। प्रविधिको दास भएर हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्थात्‌ एकअर्कासितको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न चाहँदैनौँ।”—म्याथ्यु।
सीमा तोक्नुहोस्‌। बाइबल भन्छ: “कसरी हिँडिरहेका छौ, होसियार भई ध्यान देओ, तिमीहरू निर्बुद्धि मानिस जस्तोगरि होइन तर बुद्धिमान्‌ मानिस जस्तोगरि हिँड, समयको पूर्ण सदुपयोग गर।” (एफिसी ५:१५, १६) आफैलाई सोध्नुहोस्‌, ‘मेसेज आउनासाथ तुरुन्तै रिप्लाइ गरिहाल्नुको साटो कम महत्त्वपूर्ण मेसेजहरू अरू नै समयमा रिप्लाइ गर्न सक्छु कि?’
“आफ्नो फोनलाई आवाज नआउने सेटिङमा राखेर अरू नै उपयुक्‍त समयमा मेसेजहरूको रिप्लाइ गर्नु बेस हो भनेर मैले महसुस गरेको छु। तुरुन्तै रिप्लाइ गरिहाल्नुपर्ने खालको कल, मेसेज अथवा इमेल हामीलाई कमै आउला।”—जोनाथन।
सम्भव भएसम्म अफिसको काम अफिसमै छोड्‌नुहोस्‌। बाइबल भन्छ: “सबै कामको लागि उचित समय छ।” (उपदेशक ३:१) आफैलाई यी प्रश्‍नहरू सोध्नुहोस्‌: ‘स्मार्टफोन प्रयोग गरी अफिसको काम घरमै गर्दा के त्यसले मेरो पारिवारिक जीवनमा बाधा पुऱ्‍याइरहेको छ? त्यसो हो भने यसले मेरो वैवाहिक सम्बन्धलाई कस्तो असर गरिरहेको छ? यसबारे मेरो जीवनसाथीको विचार कस्तो छ?’
“प्रविधिको कारणले हामी जुनसुकै बेला अनि जहाँ पनि काम गर्न सक्छौँ। श्रीमतीसित समय बिताइरहेको बेलामा अफिसको काम नगर्न अनि घरीघरी फोन चेक नगर्न मैले निकै प्रयास गर्नुपर्छ।”—म्याथ्यु।
प्रविधिको प्रयोग गर्नेबारे आफ्नो जीवनसाथीसित छलफल गर्नुहोस्‌। बाइबल भन्छ: “हरेकले आफ्नो होइन तर अर्को मानिसको फाइदा खोज्ने गरोस्‌।” (१ कोरिन्थी १०:२४) तपाईँ दुई जनाले कसरी प्रविधिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र कस्तो छाँटकाँट गर्नु आवश्‍यक छ भन्‍नेबारे आफ्नो जीवनसाथीसित कुरा गर्नुहोस्‌। यसको लागि तपाईँ यस लेखमा भएको छलफलका लागि सुझावहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
“म र मेरो श्रीमान्‌मध्ये कसैले फोन वा ट्याबलेट बढी नै प्रयोग गरिरहेको जस्तो लागेमा हामी एकअर्कालाई कुरा नलुकाई बताउने गर्छौँ। यसो नगर्दा समस्या हुन सक्छ भनेर हामीले राम्ररी बुझेका छौँ। त्यसैले हामी एकअर्काको विचारधारा राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ।”—ड्यानयाल।
निष्कर्ष: आफूलाई प्रविधिको दास बन्‍न नदिनुहोस्‌। बरु त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुहोस्‌।
“फोनमै व्यस्त भयौँ भने साँझपख दिन कस्तो भयो भनेर कुरा गर्न सक्ने समय बरबाद हुन सक्छ। हामीले आफ्नो जीवनमा थुप्रै कुराको लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो जीवनसाथीसित बिताउन सक्ने समय इलेक्ट्रोनिक डिभाइस चलाएर खेर फाल्नु हुँदैन।”—ट्रिस्टा र तिनका श्रीमान्‌ जोर्जेल।
“तपाईँले आफ्नो जीवनसाथीको लागि समय छुट्ट्याउनै पर्छ। मेसेज, इमेल र ताजा खबर त सधैँ आइरहन्छ तर ती पछि पनि हेर्न सकिन्छ। दुर्घटना हुन्छ भनेर गाडी चलाउँदा तपाईँ मेसेज पठाउनुहुन्‍न भने वैवाहिक जीवनमा हानि पुग्न सक्ने तरिकामा किन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस चलाउने?”—जोनाथन र तिनकी श्रीमती केट्‌लिन।
सुरुमा छुट्टाछुट्टै बसेर निम्न प्रश्‍नहरू केलाउनुहोस्‌। त्यसपछि सँगै बसेर छलफल गर्नुहोस्‌।
प्रविधिको प्रयोगले तपाईँहरूको वैवाहिक सम्बन्धलाई के-कस्तो तरिकामा बलियो बनाएको छ?
जीवनसाथीले प्रविधिको अचाक्ली प्रयोग गरेकोले वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या आएको महसुस गर्नुहुन्छ कि? गर्नुहुन्छ भने किन?
तपाईँले प्रविधिको अचाक्ली प्रयोग गरेकोले वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या आएको छ भनेर तपाईँको जीवनसाथीले गुनासो गर्नेछन्‌ जस्तो लाग्छ कि? लाग्छ भने किन?
तपाईँले मेसेज आउनेबित्तिकै पढेर रिप्लाइ गर्नुपर्ने कारणहरू छन्‌ कि? यदि छन्‌ भने यसले गर्दा तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धमा आइपर्ने समस्यालाई कसरी सुल्झाउन सक्नुहुन्छ?
प्रविधिको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा तपाईँ अनि तपाईँको जीवनसाथीले केही छाँटकाँट गर्नुपर्ने छ कि?
पुनरावृत्ति: प्रविधिको उचित प्रयोग कसरी गर्ने?
प्राथमिकता तय गर्नुहोस्‌। नबिर्सनुहोस्‌, तपाईँको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध हो।
सीमा तोक्नुहोस्‌। मेसेज आउनासाथ तुरुन्तै रिप्लाइ गरिहाल्नुको साटो त्यसको लागि छुट्टै समय तोक्न सक्नुहुन्छ कि?
सम्भव भएसम्म अफिसको काम अफिसमै छोड्‌नुहोस्‌। तपाईँ चौबीसै घण्टा काममा खट्‌न सक्नुहुन्छ भन्दैमा त्यसो गर्नै पर्छ भन्‍ने छ र?
प्रविधिको प्रयोग गर्नेबारे आफ्नो जीवनसाथीसित छलफल गर्नुहोस्‌। प्रविधिको प्रयोगले तपाईँहरूको वैवाहिक सम्बन्धलाई कस्तो असर गर्छ? त्यसको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूले केही छाँटकाँट गर्नुपर्ने छ कि?
^ अनु.6रिक्लेमिङ कन्भर्सेसन—द पावर अफ टक इन अ डिजिटल एज भन्‍ने किताबबाट लिइएको।
पुरुष र महिलाको कुराकानी गर्ने तरिका फरक-फरक हुन्छ। यसबारे राम्ररी बुझ्नुभएको छ भने अनावश्यक तनाव हुनेछैन।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रविधिको उचित प्रयोग कसरी गर्ने?
ijwhf लेख १०